Google परिणामहरू - सेल्टल्ट विशेषज्ञबाट स्क्रैपिंग डेटा
धेरै उपयोगी वेबमास्टरहरू, प्रोग्रामरहरू र विकासकर्ताहरू Google लाई उपयोगी जानकारी प्राप्त गर्न स्क्रैप गर्नुहोस्।. तिनीहरूले इच्छित वेब पृष्ठहरू र CSV र JSON ढाँचाहरूमा निर्यात डेटा निकाल्छन्. हालैका महिनाहरूमा धेरै स्क्रैपिंग उपकरणहरू पेश गरिएको छ, तर सबैभन्दा प्रसिद्धहरू तल उल्लेख गरिएको छ.
1. आयात गर्नुहोस् - certificate in healthcare. io:
यो दस दश मिनेट भित्र हजारौँ Google लिङ्कहरू स्क्रैप गर्न उपयोगी सेवा हो. आयोत संग. io, तपाई आफ्नै डेटासेट र निर्यात डेटा CSV र JSON फाइलहरूमा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ. यो उपकरणले तपाईंलाई कुनै पनि कोड लेख्न र 1000 + API हरूको काम गर्न आवश्यक छैन. यो सर्वोत्तम यसको फाईल सिकाउने प्रविधिको लागि चिनिन्छ र तपाईंको इच्छा अनुसार डेटा प्राप्त गर्दछ. यो नि: शुल्क अनुप्रयोग हाल मैक ओएस एक्स, विण्डोज र लिनक्स प्रयोगका लागि उपलब्ध छ. आयात गर्नुहोस्. io केवल एक वेब स्क्रेपर तर डाटा एक्स्टोर र क्रलर पनि होइन.
Webhose संग. io, तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा वास्तविक डेटा डेटा पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ र केहि मिनेटमा हजारौ Google लिंकहरू क्रल गर्नुहोस्. Webhose लाई यसको मेशिन सिकाउने प्रविधि को लागी सबै भन्दा राम्रो छ र तपाईंको डेटा 120 भन्दा बढी भाषामा बदल्न सक्छ. साथै, परिणामहरू जेएसओएस, आरएसएस र एक्सएमएल जस्तै ढाँचामा बचत गर्दछ. , प्रोग्रामर र व्यवसायीहरूले Webhose प्रयोग गर्छन्. io विभिन्न समाचार आउटलेटहरू र यात्रा पोर्टलहरूलाई स्क्रैप गर्न र डेटालाई सिधा हार्ड ड्राइभमा डाउनलोड गर्नुहोस्.
CloudScrape, Dexi को रूपमा पनि जानिन्छ. io, Google को केहि मिनेटमा स्क्रैप गर्न प्रयोग गरिएको एक व्यापक सेवा हो. यो उद्यमहरूका लागि उपयुक्त छ र मुख्यतः गतिशील वेबसाइटहरू लक्षित गर्दछ. (2 9) स्पैमरहरू विभिन्न साइटहरूको वेब सामग्री प्रतिलिपि गर्न यो सेवा प्रयोग गर्नुहोस्. यसले ब्राउजरमा आधारित सम्पादक प्रदान गर्दछ र तपाईंको वेब पृष्ठहरू क्रल गर्न र रियल-टाइममा जानकारी हटाउन बटहरू प्रयोग गर्दछ. तपाईं सजिलै संग Google ड्राइभ वा बाकसमा निकालेको डेटा सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ. नेट वा यसलाई JSON र CSV को रूपमा निर्यात गर्नुहोस्.
4. स्क्रैपिंग हब:
यदि तपाईले पाँच देखि दस मिनेटमा 1,000 Google लिङ्कहरू स्क्रैप गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, स्क्रैपिंग हब तपाईंको लागि सही उपकरण हो. यो एक क्लाउड-आधारित डाटा अन्वेषक र सामग्री खनन कार्यक्रम धेरै विशेषताहरु र गुणहरू संग छ. स्क्रैपिंग हब मुख्य रूप देखि हैकरहरु द्वारा बहुमूल्य वेब सामाग्री ल्याउन को लागी प्रयोग गरिन्छ र तपाईंको काम सजिलै संग प्राप्त गर्न को लागी एक स्मार्ट प्रक्सी घुमाव वाला छ.
5. भिजुअल स्क्रैपर:
भिजुअल स्क्रैपरको साथ, तपाइँ सजिलै संगमा सेकेण्डमा दुई हजार भन्दा बढी गुगल लिंकहरू लक्षित गर्न र स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ।. यो सबैभन्दा अचम्मलाग्दो र प्रसिद्ध (3 9) वेब स्क्रैपिंग र डेटा निष्कर्षण कार्यक्रम हो. डाटा SQL, JSON, XML, र CSV जस्तै ढाँचामा निर्यात गर्न सकिन्छ. तपाईं सजिलै संग सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ, मनिटर र वेब सामग्रीलाई यसको सरल बिन्दु र क्लिक गर्नुहोस् इन्टरफेसको साथ. यसको प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, Google ले धेरै रणनीतिहरू लागू गरेको छ र तपाईंलाई आधारभूत रूपमा क्याप्चा सम्मिलित गर्न सोध्नुहुन्छ. यसको मतलब यदि तपाइँ खोज इन्जिनमा बीस अनुरोध पठाउनुहुन्छ भने, क्याप्चा राम्ररी घुसिएको छैन भने केही खारेज गरिनेछ।. Google ले प्रयोगकर्ताहरूलाई यसको खोजी इन्जिन लिंकहरू स्क्रैप गर्न रोक्न, तर माथिको उपकरणहरू वेबसाइटहरू र ब्लगहरूबाट डेटा निकाल्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ.